Tu Tu Tha: ၇ ရက်သားသမီးများ အကြောင်း
Sunday, July 19, 2009 | Labels: အမှတ်တရ |
This entry was posted on Sunday, July 19, 2009 and is filed under အမှတ်တရ . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
ပျော်စရာကောင်းလိုက်တာ အစ်မ ...
ညီမတို့ကျောင်းတက်တုန်းကလည်း တက္ကသိုလ်က ဘွဲ့ရပြီးမှ 28 နှစ်မှာ ပထမနှစ်လာတက်တဲ့ အစ်ကိုကြီး တစ်ယောက်ရှိတယ်... ဆရာမလေးတွေက သူ့ထက် ၅ နှစ်လောက်ငယ်တယ်....
အင်း အမသတိတော့ထားနော် မူးမူးနဲ့သဲသောင်ပေါ် သွားမအိပ်နဲ့ ဟီးဟီး ၀ိုင်ဖိုးလိုလို့ ဘောင်းဘီခိုးသွားဦးမယ် အဟီး
မတူးပို့စ်လေး ဖတ်ပြီးတော့ သူငယ်ချင်းတွေကို ပြန်သတိရသွားပါတယ်။.
ကျောင်းတော်ကြီးကို အရမ်းလွမ်းသွားပြီ တူးရေ။
အမတို့တုန်းက ပုံဆွဲခန်းက မှန်ဆောင် ၃၀၁ လို့ထင်တာပဲ။
EC Lab လေးကိုလဲ မြင်ယောင်မိတယ်။
"အေးအေးဆေးဆေး” လဘက်ရည်ဆိုင်ကိုလဲ သတိရတယ်။
မှန်ဆောင်ရှေ့ စက္ကူပန်းခြုံအောက်က ခုံတန်းလေးလဲ အပါအ၀င်ပေါ့...။
ဒဏ္ဍာရီ ရုပ်ရှင်ကိုတော့ အင်းစိန်ဈေးနားက မဟာမြိုင် ရုပ်ရှင်ရုံမှာ ကြည့်ခဲ့ဘူးတယ်။
တော်တီလာဖလက်က လူငယ်တွေကြားမှာ အတော်တော့ လွှမ်းမိုးသားနော် အစ်မ.. ညီညီတို့မှာလည်း ဒင်နီ့အိမ်ရှိတယ်..
အဲ ၇ ရက်သားသမီးများ ပို့စ်မှာ ညီညီက ၇ ခုမြောက် မန့်ခွင့်ရသဗျ.. အဟဟဟဟ
အစ်မတို့လောက် ပျော်ခွင့်မရခဲ့ပေမယ့် ဖြတ်သန်းခဲ့ဖူးတဲ့ အင်းစိန်ဂျီတီအိုင်ကျောင်းသားဘဝကို အမှတ်ရသွားပါတယ်....။